မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးစေချင် - Yangon Media Group
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးစေချင်
မတ်လထုတ် ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်းတွင် ဆရာ ကျေး(ဆေး၁) ရေးသားထားသည့် စစ်မြစ်ဆိုသည့် ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုမိသည်။ စစ်ပွဲ၏ဘေးဒဏ်ကြောင့် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ကလေးငယ်များ၏ စိတ်ခံစားမှုနှင့် စစ်၏ဆိုးကျိုးအချို့ကို အခြေခံရေးဖွဲ့ထားသည့် ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ယခုလပိုင်းအတွင်း၌လည်း ကဗျာဆရာများနှင့် စာရေးဆရာအသီးသီးတို့မှ စစ်၏ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်သော ကဗျာများ၊ စာများ ဖြင့် စစ်၏အနိဋ္ဌာရုံများကို ထင်ဟပ်စေရန် ရေး ဖွဲ့လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အလားတူ ပြည်သူများအကြား၌လည်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက စစ်ပွဲများ ရပ်တန့်ရေးအတွက် နေရာပေါင်းစုံမှ အခွင့်အခါသင့်သလို တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုများကို တွေ့ရသည်။
သို့သော် ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျရာကဏ္ဍ ပေါင်းစုံမှ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများရှိသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ အလုံးစုံပြည့်ဝသည့် အခြေအနေသို့ မရောက်ရှိသေးပေ။ ပြည်တွင်း၌ ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်အချို့မှာ ပျက်သုဉ်းချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်း မရှိသေးချေ။ စစ်ဆိုသည်မှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပဋိပက္ခပင်ဖြစ်သည်။ စစ်၏ဆိုးကျိုး ကြောင့် ပြည်သူပေါင်းများစွာ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ကြုံတွေ့နေရမြဲပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ကြောင့်လည်း ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်တွင် တက်ရောက်လာသည့် ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သော ဘောင်းဘီဝတ် အရပ်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရလက်ထက်မှစတင်ကာ ဆောင်ရွက်လာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ယခုအရပ်သားအုပ်ချုပ်သည့် ဒီချုပ်အစိုးရ လက်ထက်ထိတိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် လျှောက်လှမ်းသမျှ ခရီးမပေါက်နိုင်သေးဘဲ ရှိနေလေ သည်။
နှစ်ပေါင်း ၇ဝကျော် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများ၏ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်သူအများစု ခံစားနေရသည့်ကာလလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မညီမျှခြင်းမှာလည်း ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ရှည် ကြာခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်လေသည်။ အစိုးရတစ်ရပ်အဖြစ် မဖွဲ့စည်းခင် ရွေး ကောက်ပွဲကာလ၌ ကြွေးကြော်ခဲ့သည့် စကားရပ်များသည် ၎င်းပါတီများ၏ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် မူဝါဒများလည်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပါတီအသီးသီးမှ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလများတွင် ကြွေးကြော်သံများစွာပြုလုပ်၍ ပြည်သူ့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအထဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) အနေဖြင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအပါအဝင် အခြား သော ကတိကဝတ်များကိုပြောဆိုခဲ့ပြီး ဝင်ရောက် ရွေးကောက်ခံရာ ပြည်သူများ၏ သောင်ပြိုကမ်း ပြို အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍအား နံပါတ်တစ်ဦးစားပေးနေရာမှထား၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဒီချုပ်အစိုးရအနေ ဖြင့်လည်း အစိုးရဖြစ်ပြီးချိန်မှစတင်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးလမ်းကို အင်တိုက်အားတိုက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်လည်း မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက်မကိုက်နိုင်သေးပေ။ ဒီချုပ်အစိုးရလက်ထက်အတွင်း အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအကြား စားပွဲဝိုင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို ပြုလုပ်၍ ၂၁ ရာစု ပင်လုံခရီးလမ်းသို့ အားအင်အပြည့်ဖြင့် လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်မှာ သုံးနှစ်သက်တမ်းသို့ပင် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးလမ်းအလျင်သည် လေစုန်လေဆန်ခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရင်းသာ ဝဲဂယက်ထဲ လွင့်မျောနေသည့်ပမာ ဖြစ် နေသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA သည် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်သာမက ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကတော့ အစိုးရသဘော ထားကို ပြောဆိုထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ မတ်လတတိယပတ်အတွင်းက အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC နှင့် NCA-N S EAO စသည့် အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့တို့ နေပြည်တော်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုတွေ့ဆုံမှုတွင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုလုပ်ရသေးသည့် မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့များဖြစ်ကြသည့် ‘ဝ’လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (UWSA)၊ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(KIA)၊ ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့(MNDAA)၊ မိုင်းလားအဖွဲ့(NDAA)၊ တအာင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(TNLA)၊ ရခိုင် AA၊ ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (SSPP)၊ ကရင်နီတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP) စသည့် အဖွဲ့များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့သည်။
အစိုးရဘက်မှ NRPC ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့် ဆွေ၊ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း အပါအဝင် တပ်မတော်ဘက်မှ NRPC အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်နှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင် တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ဆုံပွဲမှနေ၍ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ လျှော့ချနိုင်ရေး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင် ရေးအတွက် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းကြိုးပမ်းကြရန်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအရေးအတွက် နှစ်ဖက်စလုံးမှ အလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန်၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရင်းခံအကြောင်း တရားဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေး နည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြရန်အပြင် နှစ်ဖက်အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို မကြာခဏ ပြုလုပ်ရန်အတွက် စသည့် သဘောတူညီမှုငါးချက်ကို ရရှိခဲ့ပြီး ထုတ်ပြန်ထားသည်။
”အခု နောက်ဆုံးအခြေအနေထိ မြင်ရ ကြားရတဲ့သတင်းအတိုင်းဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးမှ ထူးခြားတဲ့ရလဒ်လဲ ထူးခြားတဲ့တွေ့ဆုံမှုမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီရဲ့တွေ့ဆုံမှုက အပြီးသတ်က သူတို့ရဲ့သဘောတူချက် ငါးချက်ထွက်တယ်ဆိုပေမယ့်လဲ ယေဘုယျ အရမ်းဆန်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် မတွေ့ဆုံခင်က ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့ ထွက်ရှိ မယ်ထင်တဲ့ အကျိုးအမြတ်က တွေ့ဆုံပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရလဒ်က အများမျှော်လင့်ထား သလို ဖြစ်မလာဘူး။ သာမန်တွေ့ရိုးတွေ့စဉ်လို ဖြစ်နေတယ်။ ထူးမခြားနဲ့ဘဲ ပြီးဆုံးသွားတယ် လို့ပဲထင်ပါတယ်”ဟု မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် လေ့လာသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ပါတီအစုအဖွဲ့မှ ရှမ်းနီ(တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီမှ အတွင်း ရေးမှူး ဦးစောဝင်းထွန်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ် သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းကမူ ယခုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ‘မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ယနေ့ထက်တိုင် ရွာလည်နေဆဲတိုင် ပတ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ အနာနှင့်ဆေးက လွဲ နေဆဲ၊ ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြား ဖြစ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးရင်း ဝေးဝေးသွားခဲ့ရ သော သမိုင်းစာမျက်နှာများကို သင်ခန်းစာယူ ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ကြေညာချက်များထဲ နစ်လိုက်မြုပ်လိုက်ဖြစ်နေဆဲ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် စစ်မြေပြင်များတွင် ရုပ်လုံးပေါ်လာမှသာ အနှစ်သာရ မြင့်မားမည်ဖြစ်သည်။ မနက်ဖြန် အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးခြေလှမ်း စနိုင်ဖို့ ဆိုလျှင် ဒီနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မှသာ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မှသာရွာလည် နေဆဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဖတ်ဆယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်’ဟု ပူးတွဲကြေညာချက်များနှင့် ရွာလည် နေဆဲ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားထား သည့် ဆောင်းပါး၌ ပြောဆိုထားပြန်သည်။
ထို့အပြင် ယခုသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်များသည် ယေဘုယျဆန်လွန်းသော်လည်း နိုင်ငံ ရေးပြဿနာကို အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ် ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရင်းခံအကြောင်း တရားအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးနည်း ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြရန် သဘောထား စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်မှာ အနှစ်သာရမြင့်မား သော မဟာဗျူဟာ ခြေလှမ်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းက ဆက်လက်ပြောဆိုထားသည်။
မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည့် ဦးဖေသန်းကမူ အဆိုပါတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှု ရလဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ ”အဲဒီမှာ အဓိကထုတ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ AA အဖွဲ့ နဲ့ NRPC ကော်မတီရဲ့ကြားမှာ ပြောဆိုချက်က တော့ AA အဖွဲ့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ ဆွေးနွေး တဲ့အခါမှာ AA ကိစ္စကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး NCA လမ်းကြောင်းထဲကိုရောက် ရှိလာဖို့ တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာကို ဇောင်းပေး ပြီး ပြောကြားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာပဲ AA အဖွဲ့က ရခိုင်ပြည်နယ် အဖြူရောင်နယ်မြေကိုရောက်လာတဲ့အတွက် လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ စကားကစပြီး တော့ပြောတော့ လမ်းကြောင်းက ပျက်သွားသလို ပိတ်သွားသလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။ AA အဖွဲ့ကလည်း လက်ရှိအဲဒီအထဲရောက်နေပြီ လေ။ သူတို့လဲ နောက်ဆုတ်ဖို့မရှိဘူးပေါ့။ ဒီ တော့ တိုက်ပွဲတွေပဲဆက်ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒီဟာက ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းကို အခက်အခဲအဖုအထစ် ဖြစ်စေတယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ရှုမြင်တယ်”ဟု NRPC နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံစဉ်က ရခိုင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကို ၎င်းအနေဖြင့် ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်နေသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် အဖြူရောင်နယ်မြေ ဖြစ်ခြင်းနှင့် ထိုနယ်မြေအားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အခြေချရန်ကြိုးစားခြင်းသည် လုံ ခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည့်အတွက် အစိုးရဘက်က ထိုက်သင့်သည့် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဖွင့် မိန့်ခွန်းတွင် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ပြောဆိုခဲ့သည့်အပေါ် ဦးဖေသန်းက သုံးသပ်ပြောဆို ခြင်း ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ကျော်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်ကာအခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုနေခြင်းတို့အစားနိုင်ငံရေးစားပွဲ ဝိုင်းသို့လာရောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း NRPC ဘက်က ပြောဆိုထားသည်။ ”ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ကြိုးစားနေတာကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးကိုတွေ့ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးက အလွန်တရာမှ အရေးကြီးတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးဆိုရင် ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နှစ်ဖက် စလုံးကနေ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားပြီးလုပ်ဖို့လဲ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အဓိက,ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တဲ့အခါ အစိုးရကလဲ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ အကုန်လုံးလက်တွဲပြီး မှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လုပ်သွားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလဲ အကုန်လုံးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ ချန်ထားတဲ့ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရင် အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်”ဟု ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မှ ဥက္ကဋ္ဌ ကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းကမှတ်ချက်ပြုသည်။
သို့သော် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှုအပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၌ တိုက်ပွဲများရှစ်ကြိမ်ထက်မနည်း ဖြစ်ပွားခဲ့မှုကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးလမ်းကို နှောင့်နှေးစေမည်လားဆိုသည့် ပြည်သူများကြားတွင် စိုးရိမ်မှုက ဖြစ်ပေါ်နေ ပြန်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် တပ်မတော်မှ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ငါးခု၏နယ်မြေများ၌ စစ်ရေးလှုပ်ရှား မှုကို ဧပြီ ၃ဝ ရက်အထိ လေးလကျော်ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းထားသည့်ကာလသည် ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လုံလောက်သည့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးက မတ် ၂၅ ရက်က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင် ပြောဆိုထားသည်။ ”အစိုးရရော၊ တပ်မတော်ရောက ငြိမ်း ချမ်းရေးကို ဖိတ်ခေါ်တယ်။ အပစ်ရပ်ပေးတယ်။ အဲဒါကိုမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုချင်လို့ ငြိမ်းချမ်း ရေးကိုရရှိအောင် ပြည်သူကို ဗဟိုပြုမစဉ်းစားဘဲ နဲ့ မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွက် စဉ်းစားပြီးကာမှ လုပ်လာခဲ့ရင် လုပ်တဲ့အဖွဲ့မှာပဲ တာဝန်ရှိမှာဖြစ် ပါတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးက ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက်မှစတင်ကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ယခုအစိုးရနှင့် တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း အပစ်ရပ်စဲရေးကိစ္စများ အောင် မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။ ထို့အပြင် အပစ် ရပ်ကာလများ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများပေါ်တွင် တပ်မတော်မှ စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အကြောင်းပြု၍ မဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို မတောင်းဆိုရန် ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှစတင်ကာ ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးခရီး လမ်းသည် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို အစဉ်မပြတ် ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ ထို့အပြင် နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှု များ၌ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် ဆွေးနွေးမှုများစွာ လိုအပ်ကြောင်းလည်း လေ့လာသူများက မှတ်ချက်ပြုပြောဆို ကြသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်သည် နီးလျက်နှင့်ဝေးနေဆဲ ခရီးပမာဖြစ်နေပြီး ပြည်တွင်းစစ်၏ သံသရာသည် မည်မျှအကြာအထိလည်နေဦးမည်ဆိုသည်ကို မတွေးနိုင်ပေ။ ထို့အတူ စစ်၏ သားကောင်များအဖြစ် ပြည်သူများ၏ဘဝများသည်လည်း မည်မျှစတေးရဦးမည်ကိုလည်းမပြောနိုင်ပေ။
စာရေးဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကာ ခေတ်ရနံ့ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆရာ လေးကိုတင်ကတော့”ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေကတော့ အလှမ်းဝေးနေဆဲလို့ပဲမြင်တယ်”ဟု သူ့အမြင်ကိုဆိုသည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင် သက်တမ်းရှည် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကို နိဋ္ဌိတံရန် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအကြား တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းရတော့မည့်အခြေအနေပင် ဖြစ် တော့သည်။
Deutsche ဘဏ်နှင့် Commerzbank တို့ တရားဝင် ပူးပေါင်းရန် ဆွေးနွေး
"ပြည်သူ့ငွေကို လက်တည့်စမ်းတဲ့ အလုပ်မျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။ မအောင်မြင်ရင် ကျွန်တော် တာဝန်?
အစိုးရဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ခြင်းကို မူအသစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်နေ
တာချီလိတ်မြို့တွင် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ကျေးရွာအချို့ရှိ နေအိမ်များ အမိုးလန်ပြီး ပျက
ပွဲစား၏ စည်းရုံးမှုကြောင့် ဘန်ကောက်တွင် တရားမဝင် အလုပ်လုပ်နေသည့် အမျိုးသမီးငယ် သုံးဦး လူမ??
၃၈ ဦးသေဆုံးသော ရေနံချောင်းရွာနှစ်ရွာပဋိပက္ခတွင် သံသယရှိသူ သုံးဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီး
ရိုက်ကွင်းမှာ တစ်ကိုယ်လုံး ပြာနှမ်းသည်အထိ အအေးမိခဲ့တဲ့ အလိဆီယာ ဗီကန်ဒါ